Ezi zizinto ezintsha ze-iOS 13.4 | IPhone iindaba
ULuis Padilla | | iOS 13, Izaziso
I-Apple isungule iiyure ezimbalwa ezidlulileyo iBeta yokuqala ye-iOS 13.4, kwaye yenza njalo ngokuzisa iindaba ezinomdlaEminye engalindelekanga kwaye eminye inemisebenzi esiyibonileyo kwii-Betas zokuqala ze-iOS 13 kweli hlobo kodwa zanyamalala ngaphandle kwengcaciso. Sikuxelela yonke into entsha malunga neBeta yokuqala ye-iOS 13.4.
1 Yabelana ngeefolda
2 Ukuphuculwa kwebha yeposi
3 IMemoji entsha
4 Ukuthenga jikelele
5 Ezinye izinto ezintsha
Yayingumsebenzi owawusenziwa Uninzi lwethu luqhwabele izandla xa uApple wasibhengeza phambi nje kwehlobo, kumboniso we-iOS 13 ngexesha le-WWDC yenyanga kaJuni 2019. Kwi-Betas yokuqala sakwazi ukuyivavanya kwaye ngequbuliso yanyamalala, ngaphandle kwengcaciso. Into ekudala ilindelwe yayiphuma esandleni, kodwa nangona kuye kwafuneka silinde de kube ngu-2020 ukuyibona kwakhona, ukhetho lokwabelana ngeefolda ezipheleleyo ze-iCloud nabanye abantu ekugqibeleni luyafumaneka.
Singakhetha nayiphi na ifolda esinayo kwi-iCloud kwaye sabelane ngayo nabani na esifuna ukumnika imvume yokuhlela umxholo okanye ngeendlela zokufunda kuphela. Sinokwabelana ngekhonkco, ukuze nabani na onako akwazi ukufikelela, okanye ngqo ebantwini, Ukuqinisekisa ukuba ayinguye wonke umntu onokufikelela kumxholo wethu.
Ukuphuculwa kwebha yeposi
Ibha engezantsi ye-imeyile ye-imeyile yayingenantsingiselo, kunye neqhosha lenkunkuma ecaleni kweqhosha lokuphendula, elibangela abasebenzisi abaninzi ngempazamo bayicime imeyile endaweni yokuphendula kwi. IOS 13.4 ilungisa le bug ngebar esezantsi entsha apho iphepha likude kwiqhosha lokuphendula.
U-Apple ulungiselele iMemoji entsha esithoba esinokwabelana ngayo nathi kwizicelo zemiyalezo. Unomsindo, ilaptop yakho, ipati, ukumangaliswa, ukurhoxa ... iMemoji ibe zizinto ezithandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi be-iPhone, kuba banokwabelana ngazo ngeMiyalezo, iTelegram okanye iWhatsApp ukukuthumelela umyalezo ngabafowunelwa.
Kule Beta yokuqala sikwazile ukubona imiqondiso yokuqala yento iApple elungiselela ukudibanisa ukuthengwa kuwo onke amaqonga ayo. Iiapps zendalo iphela ziyasondela kwaye ke kuthengwa kuyo yonke indawo. Uluvo luka-Apple kukuba singabhatala kube kanye kuphela kwaye sikwazi ukufikelela kwisicelo esisithengileyo kulo naliphi na iqonga: i-iOS, i-iPadOS, i-watchOS, i-tvOS kunye ne-macOS.
Le yimeko eyenzeka iminyaka phakathi kwe-iOS ye-iPhone kunye ne-iPad (ngoku eyi-iPadOS), xa iApple yakhupha i-tvOS kunye ne-watchOS yenziwa ngale ndlela, kodwa ii -apps zeMac zazikwelinye icandelo, kwaye iApple ifuna ukuba iphele. Ngokucacileyo oku kuyakuhlala kusezandleni zomphuhlisi Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uza kulunikezela na olu khetho, kodwa ngokuqinisekileyo uninzi lukhetha le pack intsha iphela.
Ezinye izinto ezintsha
Iimpawu zeCarKit, eziya kusivumela ukuba sivule imoto yethu nge-iPhone yethu sisebenzisa itekhnoloji ye-NFC, ukuba imoto iyahambelana, ngokucacileyo.
ICarPlay yazisa ngezinto ezintsha ezinokukhethwa ngabaphuhlisi, ezinje ngokuba kunokwenzeka kwezinye iinkqubo zokuhamba ngaphandle kweMephu ukuba zivele kumboniso weekholamu ezininzi.
I-watchOS 6.2 iya kubonelela ngesakhono sokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Iindlela ezimfutshane ezimfutshane zikaShazam.
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo zenkqubo yeefoto kwi-iPadOS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » Ezi ziindaba ze-iOS 13.4
Pepe Galindo umfanekiso wokugcina sitsho
Kwaye ngoku baya kwamkela impuku yomlingo 2, eyamkela nabani na ngaphandle kweyabo.
Phendula Pepe Galindo
Yonke imihla-Zonke iindaba ezikwi-iOS 13.4
Itoliki kaGoogle ihlaziywa ngokudibanisa inkxaso yemowudi emnyama